ကားထဲမှာမှန်အလုံပိတ်ပြီး သီချင်းတွေအော်ဆိုတတ်တဲ့ Alice Ong ကတော့ SUV ကို ကြိုက်ပါတယ်တဲ့ ။
Sai Win : ဘယ်လိုကားမျိုးကို ကြိုက်နှစ်သက်သလဲ?
Alice Ong : SUV ပေါ့ နည်းနည်းမြင့်တဲ့ကားလေးတွေသဘောကျတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် အဲလိုမျိုးကျတော့ လမ်းကြမ်းလည်း ကိုယ်ကသိပ်ပြီးတော့ စိတ်မပူရဘူးပေါ့နော်။ အဲဒီလိုကားမျိုးလေးကို သဘောကျပါတယ်။
Sai Win : ကားကို ကိုယ်တိုင်မောင်းရတာ သဘောကျသလား?
Alice Ong : ကိုယ်တိုင်မောင်းရတာ ပိုသဘောကျတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင်ကွာ အိမ်မှာဆိုတော့မိသားစုဝင်တွေရှိတယ်။ ကားမှာကြတော့ အသံလည်းလုံတော့လေ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တစ်ယောက်တည်း သီချင်းတွေအော်ဆိုတာတို့ တစ်ယောက်တည်းမောင်းတဲ့အချိန်ဆိုရင်ပေါ့နော် သီချင်းတွေအော်ဆိုလိုက်မယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် မီးပွိုင့်တွေရောက်ရင်၊ ကားပါကင်တွေရောက်ရင် ၅ မိနစ် ၁၀ မိနစ်လောက် သရုပ်ဆောင်ကျင့်လိုက်မယ်ပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုးတွေ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လျှောက်လုပ်တတ်တော့ ကားကို ကိုယ်တိုင်မောင်းရတာ ပိုသဘောကျတယ်။
Sai Win : ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမှတ်တရလေးတွေကော?
Alice Ong : အမှတ်တရဆိုရင်တော့ Alice ကားစမောင်းတုန်းက အဲဒီတုန်းကဆိုရင် ဆလွန်း Type လေးပဲ။ Alice သူငယ်ချင်းတွေက ဘေးကနေကြည့်ပေးရတာ။ ဖြစ်ချင်တော့ သူတို့တွေက တစ်ယောက်မှကားမမောင်းတတ်ဘူး။ လမ်းတော့လျှောက်ညွှန်ပေးတာ။ ဘုရားကျောင်းထဲဝင်တော့လေ ကွေ့လိုက်တယ်ကွာ၊ ကားကိုသူတို့ဖက်ကနေလှမ်းကြည့်ပေးတာ လွတ်တယ် လွတ်တယ် မောင်း၊ ဆွဲ ဆိုလို့ ဆွဲလိုက်တာ ဘုရားကျောင်းက ပန်းအိုး ၅ လုံးကွဲသွားတယ်။ (ရယ်လျက်) အဲဒီအချိန်တော့ အရမ်းအမှတ်တရဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။
Sai Win : ယာဉ်ထိန်းရဲအဖမ်းခံရတာမျိုးတွေရော ရှိလား?
Alice Ong : တစ်ခါတလေ ဆိုင်သွားတယ်မလား။ သူများတွေရပ်ထားတော့ ကိုယ်လည်းရပ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီမှာ ယာဉ်မရပ်ရ နေရာဖြစ်နေတော့၊ ပြီးတော့ အတုံးကဖြူနီကျား မမြင်တော့ဘူး အတုံးတွေက အရောင်တွေမွဲသွားတော့။ အဲဒီမှာ အသိမ်းခံရဘူးတယ်ပေါ့နော်။ နောက်တော့ အရမ်းမှတ်သွားတယ်ပေါ့။ လျှောက်မရပ်ရဲတော့ဘူး။ နည်းနည်းဝေးလည်း လမ်းတွေဘာတွေလျှောက်တယ်။ အဲဒီလိုမျိုးမရပ်တော့ဘူး။
Sai Win : အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ရော?
Alice Ong : ရုပ်ရှင်တွေရိုက်ဖို့လည်း လက်ခံထားတယ်။ ၈ လ ပိုင်း၊ လလယ်ပိုင်းလောက်ဆိုရင်တော့ ရုပ်ရှင်တွေစရိုက်တော့မယ်။ စီးရီးတွေလည်း ရိုက်ဖို့လက်ခံထားပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကတော့ သူတို့လည်းမပြောခိုင်းသေးဘူး။ အဓိကကျတော့ Pre-production ပိုင်းဆိုတော့လေ။ စရိုက်မယ်၊ ရုပ်ရှင်ကားထွက်သွားတော့မှပေါ့။ အမလေး ရိုက်နေရင်းနဲ့တောင်မှ သူတို့က ဓါတ်ပုံတွေဘာတွေမတင်စေချင်ဘူးပေါ့နော် အဲဒီလိုမျိုးကျတော့...... ကာရိုက်တာကတော့ ဇာတ်နာနာလေး ကာရိုက်တာဖြစ်တယ်။ အဲဒီလိုမျိုး အရမ်းပြင်ဆင်စရာမလိုတဲ့ ကာရိုက်တာမျိုးလေး။ သဘာဝဆန်ဆန် Realistic ဆန်ဆန်ပေါ့ အဲဒီလိုမျိုးကာရိုက်တာလေးဖြစ်တယ်။ ဇတ်နာတာဆို နည်းနည်းပိန်ရင်ပိန်ရမှာပေါ့နော်။ မပြောတတ်ဘူး။ အခုက ရုပ်က အရမ်းစိတ်ချမ်းသာပြီး ပါးတွေဖောင်းနေတော့ ဇတ်နာတာဆိုပြောလို့မရဘူး နည်းနည်းဝိတ်လျော့ရင် လျော့ရလိမ့်မယ်။ (ရယ်လျက်)
ဖောက်စွပ်ယာဉ်များ အသစ်ထပ်မံပြုလုပ်မှုမရှိတော့ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ကညန တိုင်းညွှန်မှူးမှ ပြောကြား
လက်တလောတွင် City Taxi မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မှတ်ပုံတင်ထားသော Taxi ယာဉ်များကိုသာ မှတ်ပုံတင်ပေးနေ